Försäkringskassan oo lacagta loo kordhiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Försäkringskassan oo lacagta loo kordhiyo
La daabacay fredag 18 september 2015 kl 11.21
Hey’adda Caymiska Försäkringskassan waxaa miisaaniyadeeda lagu kordhiyey 250 milyan oo karoon sannadkii. Lacagtan waxaa loogu talo garay in lagu qarash gareeyo, qarashka faraha badan ee hey’adda uga baxa dadka shaqada uga maqnaada jirro ku qornaansho.
Hindisaha lacagta loogu kordhinayo Försäkringskassan waxuu ku jiraa miisaaniyadda dayrta ee dowladda oo la soo bandhigi doono isniinta todobaadka foodo nagu soo haysa.
Hindisaha lacagta loogu kordhinayo Försäkringskassan waxuu ku jiraa miisaaniyadda dayrta ee dowladda oo la soo bandhigi doono isniinta todobaadka fooda nagu soo ahaya.
Sida ay hey'adda Försäkringskassans laga soo xigtay qarashka hey'adda uga baxi doonta caymiska jirrada ayaa la saadaalinayaa in kor u kaci doonta boqolkii 500 sannadka 2019, halka qarashka uga baxa caymiska jirrada uu marayo heerkii ugu sareeyey tan iyo sannadkii 2008.
Wasiirka arrimaha caymiska ayaa imminka doonaya in lacag dhan 250 milyan oo karoon sannadkii ku kordhiyo miisaaniyadda hey'adda Försäkringskassan si xal loogu helo dhibaatadan.
- Dhamaan dadka jirrada ku qoran waa in ay helaan fiirada gaarka ah ee ay u baahan yahiin. Xiriiirka lagamo maarmaanka ahna lala yeesho shaqo baxiyaha iyo xaruumaha caafimaadka sidoo kale waa muhim, ayey tiri wasiiradda arrimaha Caymiska Annika Strandhäll.
Dhamaadka dayrta ayey dowladda qorsheynaysaa in ay shaaciso qorshe ku sabsan sidii dadka jirrada ku qoran shaqada loogu celin lahaa.